Margarekha ब्लड क्यान्सरबारे ७ तथ्य – Margarekha
ब्लड क्यान्सरबारे ७ तथ्य
क्यान्सर रोगको नाम सुन्नासाथ धेरैको मुटु काप्छ । क्यान्सरका विभिन्न रूप हुन्छन्, जस्तैः ब्रेस्ट क्यान्सर, ब्रेन ट्युमर, ब्लड क्यान्सर, लंग क्यान्सर या शरीरका विभिन्न अंगको क्यान्सर । विज्ञानले क्यान्सरको पूर्ण निराकरण सम्भव भएको बताए पनि यसको कुनै ग्यारेन्टी भने हुँदैन । क्यान्सर आफैँमा खतरनाक रोग त हो नै त्यसमध्ये ब्लड क्यान्सर अझ बढी हानिकारक मानिन्छ । यी हुन् ब्लड क्यान्सरबारे सात तथ्य :
डा. अल्पेस किकानी
४. ब्लड क्यान्सरको कारण फरक— फरक हुन सक्छन् । त्यस्ता कारणमध्ये धुम्रपान पनि एक हो । धुम्रपान क्यान्सरको लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा मानिन्छ । धुम्रपान गर्ने महिलामा क्यान्सरको अझ बढी सम्भावना हुन्छ । चुरोटमा भएको टाँक्सिनले क्यान्सरको ट्स्युज बढाउने काम गर्छ ।
७. ब्लड क्यान्सरको निराकरण यसमा भर पर्छ कि रोग कति फैलिएको छ । रेडिसियन थेरापी, किमोथेरापी र सर्जरीको माध्ययमबाट यसको ट्युमर हटाई उपचार गर्न सकिन्छ ।नयाँ पत्रिकाबाट
१० माघ २०७४, बुधबार ०७:४७ प्रकाशित